Guryaha istuudiyaha ee iftiinka ah oo laga kireeyo Cricklewood
Liiska Magacyada Guri: » Guryaha la degan yahay » Studios » GB » London » Guryaha istuudiyaha ee iftiinka ah oo laga kireeyo Cricklewood1
Cusboonaysiinta ugu dambeysay 2020-01-17
Wax laga beddelay 4 toddobaad kahor
Tirin. musqulaha: 1
Status: Xaalad wanaagsan
Tirin. dabaqyada: 1
Nooca nidaamka qaboojinta: None
Koodhka Zip :: NW2 4LY
Qoladan raaxada leh ee ku taal Melrose Avenue, ee ku taal Cricklewood ayaa si buuxda loo diyaariyey. Hantida dhalaalaysa waxay leedahay qurxinta qurxinta, oo leh qurxinta qurxinta iyo qalabka guryaha lagu qurxiyo. Kushiinka si buuxda ayaa loo qalabeeyay, waxaana ku yaal 1 musqul oo aad u wanaagsan oo leh meel lagu qubeysto.
Cricklewood waa deegaan inta badan degan oo laga helo bannaanka London. Waxaa ku yaal dukaanno badan iyo qaar makhaayado maxalli ah oo fiican oo aan si sahlan loo gaari karin, iyo sidoo kale beero qurxoon oo lagu raaxeysto maalmaha xagaaga ee qoraxda.
Lambarka taleefanka ma jiro show
Diiwaangaliyay 17. Jan 2020
La xiriir xayeysiistaha Ma jiro taleefanka nuxxxx
Dooro category aQaabilaada QolalladaGuryaha la degan yahay Gole guryaha Guryaha Studios Aqalada BungalowsDhul fara badan Guryaha DegaankaGaraashyada iyo meelaha gawaarida la dhigto Gawaarida gawaarida la dhigtoReal Estate Real Estate Goobaha xafiiska Dhismaha warshadahaDhammaan Kuwa Kale Dhammaan Kuwa KaleDirectory Business Bixiyeyaasha Adeegga Maaliyadeed Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha Nadiifinta qandaraasleyaasha Adeegyada NaqshadeyntaTusaha Wakiilaha Guri Guri Wakiilada guryaha
Diiwaangashan Janaayo 17, 2020
Iskuulada ku dhow NW2 4LY